ကိုယျဝနျကွီးနဲ့ ကိုဗဈကူးစကျခံထားရပမေယျ့ အံတုပွီးရငျဆိုငျနတေဲ့ သူမရဲ့လကျရှိအခွအေနတှေကေို ပွောပွလာတဲ့ နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျ – စှယျစုံသုတ
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရပေမယ့် အံတုပြီးရင်ဆိုင်နေတဲ့ သူမရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကို ပြောပြလာတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ကတော့ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်းကတည်းက လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့သလို လှူဒါန်းမှုတွေကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက်ပြုလုပ်ပြီး ဖေးမကူညီကာ အားလုံးနဲ့အတူ ရပ်တည်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ဟာ ယခုလက်ရှိအချိန်မှာဒုတိယမြောက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရတာလည်းဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလောက်က ကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရချိန်မှာ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေကလည်း သူမအတွက်စိတ်ပူနေကြသလို မိသားစုမိတ်ဆွေတွေကလည်း စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာပါ……။
အခုလို ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရပေမယ့်လည်း နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ဟာ ရောဂါကိုအံတုရင်ဆိုင်ရင်း သူမကျော်ဖြတ်ခဲ့ပုံလေးကို ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ “ဒီရောဂါ အကြောင်း ကိုယ်တစ်ကိုယ်စာ ခံစားလို့ရသလောက် ပြောပြပေးမယ်ရှင့်….ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ ဖစ်တာသိချင်နေလို့တဲ့…..ကျွန်မ ရောဂါပျောက်ခါနီးမှ ကိုဗစ်ဖစ်နေတာသိတာ
လွန်ခဲ့တဲ့ 4ရက်လောက်က အာခေါင်တွေစနာတယ်…နှာခေါင်းပိတ်တယ်…ကိုယ်နည်းနည်းပူတယ်….အဲ့ဒါလည်း ငါမိုးမိလို့ တုတ်ကွေး ဖစ်တယ်လောက်ပဲသဘောထားတယ်….စားစရာရှိတာကတော့ အရင်ကထက်ပိုစားတယ်….ပိုအိပ်တယ်….အင်တာနက်မှာ ဟာသတွေရှာကြည့်တယ်….သရဏဂုံ ရွတ်နေတယ်…ဆရာသမားတွေ ကလည်း မေတ္တာပို့ပေးနေတယ်တဲ့…ပီးတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ 2ရက်က အနံ့စပျောက်တယ်….ဘာရေမွှေးနံ့ ဘာဟင်းနံ့မှမရတော့ဘူး
မကြောက်ပါဘူး နှာခေါင်းပိတ်နေတယ်ပဲ သဘောထားလိုက်တယ်….အိမ်ကလူတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ စိုးရိမ်ကြတာပေါ့ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ဆိုတော့….တနေ့ ပါရာဒက် 500 အားနဲ့ စီဗစ် မနက်နဲ့ည သောက်တယ်….အားရှိတာတွေစားတယ်…အိပ်တယ်….ရေပုံမှန်ချိုးတယ်…ဒီနေ့မနက် အနံ့ပြန်ရပီ…နေလည်းကောင်းတယ်….ခု ယောက်ခမက ကြာဇံဟင်းခါးနဲ့ ရှောက်သီးသုပ် ကျွေးတယ်…ညနေ အိတုံမရဲ့ ဟော့ပေါ့ အကောင်းစားလာပို့လိမ့်မယ်….စားမယ်…အိပ်မယ်…နားမယ်….
အားလုံး စိတ်ချရမှ အလုပ်တွေပြန်လုပ်မယ်….ငါ့ဆီ ဒီရောဂါ ရောက်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်။ဘာဆေးနဲ့မှ မပျောက်ဘူးသာမာန်ပါရာစီတမော့နဲ့ပဲအဓိက အစာအဟာရမပြတ်ဖို့နဲ့ စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ကပျောက်မယ့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပါပဲ အမျိုးတို့…..” တို့ဆိုပြီးရေးသားမျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျဟာ ယခုလကျရှိအခြိနျမှာဒုတိယမွောကျကိုယျဝနျဆောငျထားရတာလညျးဖွဈပွီး လှနျခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးလောကျက ကိုဗဈကူးစကျခံခဲ့ရတယျလို့သိရပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျထားရခြိနျမှာ ကိုဗဈကူးစကျခံခဲ့ရတဲ့အတှကျ ပရိသတျတှကေလညျး သူမအတှကျစိတျပူနကွေသလို မိသားစုမိတျဆှတှေကေလညျး စိုးရိမျပူပနျနကွေတာပါ……။
အခုလို ကိုယျဝနျကွီးနဲ့ကိုဗဈကူးစကျခံထားရပမေယျ့လညျး နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျဟာ ရောဂါကိုအံတုရငျဆိုငျရငျး သူမကြျောဖွတျခဲ့ပုံလေးကို ပရိသတျတှအေတှကျ မြှဝလောခဲ့ပါတယျ။ “ဒီရောဂါ အကွောငျး ကိုယျတဈကိုယျစာ ခံစားလို့ရသလောကျ ပွောပွပေးမယျရှငျ့….ကိုယျဝနျကွီးနဲ့မို့ ဖဈတာသိခငျြနလေို့တဲ့…..ကြှနျမ ရောဂါပြောကျခါနီးမှ ကိုဗဈဖဈနတောသိတာ
လှနျခဲ့တဲ့ 4ရကျလောကျက အာခေါငျတှစေနာတယျ…နှာခေါငျးပိတျတယျ…ကိုယျနညျးနညျးပူတယျ….အဲ့ဒါလညျး ငါမိုးမိလို့ တုတျကှေး ဖဈတယျလောကျပဲသဘောထားတယျ….စားစရာရှိတာကတော့ အရငျကထကျပိုစားတယျ….ပိုအိပျတယျ….အငျတာနကျမှာ ဟာသတှရှောကွညျ့တယျ….သရဏဂုံ ရှတျနတေယျ…ဆရာသမားတှေ ကလညျး မတ်ေတာပို့ပေးနတေယျတဲ့…ပီးတော့ လှနျခဲ့တဲ့ 2ရကျက အနံ့စပြောကျတယျ….ဘာရမှေေးနံ့ ဘာဟငျးနံ့မှမရတော့ဘူး
မကွောကျပါဘူး နှာခေါငျးပိတျနတေယျပဲ သဘောထားလိုကျတယျ….အိမျကလူတှနေဲ့ သူငယျခငျြးတှကေတော့ စိုးရိမျကွတာပေါ့ ကိုယျဝနျကွီးနဲ့ဆိုတော့….တနေ့ ပါရာဒကျ 500 အားနဲ့ စီဗဈ မနကျနဲ့ည သောကျတယျ….အားရှိတာတှစေားတယျ…အိပျတယျ….ရပေုံမှနျခြိုးတယျ…ဒီနမေ့နကျ အနံ့ပွနျရပီ…နလေညျးကောငျးတယျ….ခု ယောကျခမက ကွာဇံဟငျးခါးနဲ့ ရှောကျသီးသုပျ ကြှေးတယျ…ညနေ အိတုံမရဲ့ ဟော့ပေါ့ အကောငျးစားလာပို့လိမျ့မယျ….စားမယျ…အိပျမယျ…နားမယျ….
အားလုံး စိတျခရြမှ အလုပျတှပွေနျလုပျမယျ….ငါ့ဆီ ဒီရောဂါ ရောကျကိုရောကျလာနိုငျတယျ။ဘာဆေးနဲ့မှ မပြောကျဘူးသာမာနျပါရာစီတမော့နဲ့ပဲအဓိက အစာအဟာရမပွတျဖို့နဲ့ စိတျဓာတျမကဖြို့ကပြောကျမယျ့တဈခုတညျးသောနညျးလမျးပါပဲ အမြိုးတို့…..” တို့ဆိုပွီးရေးသားမြှဝလောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ
ပုသိမျမွို့မှာ တဈရကျတညျး ကိုဗဈလူနာ ၂၄ ဦးသဆေုံး